လူသားတို့၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တလျှောက် စာနာရိုင်းပင်းတတ်ခြင်း၏ အခန်းကဏ္ဍ - Hello Sayarwon
လူသားတို့၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တလျှောက် စာနာရိုင်းပင်းတတ်ခြင်း၏ အခန်းကဏ္ဍ
စာနာရိုင်းပင်းတတ်ခြင်းဆိုတာ အခြားသူတို့ရဲ့နေရာကို အစားဝင်ကြည့်ပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ နာကျင်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုများကို မျှဝေခံစား နားလည်မှုပေးခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ လူသားတွေဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို သိရှိပြီး အခြားသူတွေနဲ့အတူ လူမှုအသိုင်းအဝန်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု စတင်တည်ထောင်လာတဲ့ အချိန်ကစလို့ သနားကြင်နာမှုဆိုတဲ့ ခံစားချက် စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ဒါဟာ လူသားတွေကို ၎င်းတို့ရဲ့ လူမှုရေးရာ အဆင့်အတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နားလည်သဘောပေါက်လာအောင် အထောက်အပံ့ပေးခဲ့တဲ့ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူ့သမိုင်းကြောင်း ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တလျှောက် အရေးပါအရာရောက်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ “လူသားတို့၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တလျှောက် စာနာရိုင်းပင်းတတ်ခြင်း၏ အခန်းကဏ္ဍ” ဆိုတဲ့ စာသားကို ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါဆိုသလို စာနာရိုင်းပင်းတတ်ခြင်းကို ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ အမှတ်မှားလေ့ရှိတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ စာနာရိုင်းပင်းတတ်ခြင်းဆိုတာ အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ခက်ခဲဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေကို ခံစားနားလည်ပြီး သူ့အတွက် အကူအညီဖြစ်မယ့် အရာတစ်ခုခု ပြုလုပ်ပေးချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒရှိခြင်းကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာတရားကိုတော့ အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ခံစားချက်များကို မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေသလို နားလည်ခံစားပေးခြင်းလို့ သုတေသနပညာရှင်တွေက အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
သမိုင်းသုတေသီများရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရ လူသားတွေမှာ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ ဗီဇရှိပြီး ၎င်းဗီဇကို အနောက်နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်မှုကိုဦးစားပေးတဲ့ အယူအဆက သက်သေပြလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူသားတိုင်းဟာ မိမိအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ကိုသာ စဉ်းစားပြီး အခြားသူတွေ အထူးသဖြင့် ခက်ခဲဆင်းရဲတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသူတွေကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘူးဆိုရင် လူသားတို့ရဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဟာ ရှေးပဝေသဏီကတည်းက ဆက်လက်တိုးတက်လာခြင်းမရှိတော့ဘဲ ရပ်တန့်ပျောက်ကွယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တစ်စုကတော့ လူသားတွေ အောင်အောင်မြင်မြင် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပြီး ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အသီးသီးကို ဖြတ်ကျော်လာနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာ အများအကျိုးလိုလားခြင်း၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ခြင်းနဲ့ စာနာရိုင်းပင်းတတ်ခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ လူသားတွေအနေနဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့၊ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးဖို့ သဘာဝတရားနဲ့သာမက အခြားသူတွေနဲ့ပါ ဆက်သွယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေအပေါ် နားလည်မှုပေးပြီး သနားကြင်နာခြင်းအားဖြင့် သူတပါးအတွက် အကူအညီ ဖြစ်စေရုံသာမက မိမိရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ မြှင့်တင်နိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒေါသဟာ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အပြင် လူသားတွေကို သေကြေပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အထိ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်တာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ စာနာရိုင်းပင်းမှု၊ တွေးခေါ်မြော်မြင်မှုနဲ့ သနားကြင်နာမှုတို့ ပိုမိုအားကောင်းလာအောင် လေ့ကျင့်မွေးမြူကြမယ်ဆိုရင် ဒေါသ၊ အမျက် စတဲ့ အနုတ်သဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ ပေါက်ဖွားမလာအောင် ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတပါးအတွက်ရော မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်ပါ ကောင်းကျိုးအသီးအပွင့်တွေ ဆောင်ကြဉ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာနာရိုင်းပင်းတတ်ခြင်းနဲ့ အခြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု အခြေအနေတွေဟာ လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တလျှောက် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည် တောက်ပစေကြောင်း သက်သေသာဓကများလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
အကယ်၍ လူသားတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ၎င်းတို့ရဲ့ မူလဗီဇဖြစ်တဲ့ ဒေါသနဲ့ အမုန်းတရားတို့ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုသက်သက်ကိုသာ ခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေဟာလည်း ယခုထက် အဆပေါင်းများစွာ လျော့နည်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ပွဲတွေနဲ့ အခြားရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ကြုံတွေ့နေရပေမယ့် လူဦးရေ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးပွားနေခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးမှာ စာနာရိုင်းပင်းမှုနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ထာဝရတည်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သစ္စာတရားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြနေတဲ့ သက်သေတစ်ခုလို့ဆိုရင် မှားနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
The Role of Compassion in Altruistic Helping and Punishment Behavior. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26655837. Accessed October 3, 2016.
The Role of Compassion in Moral Education. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/030572499103278?journalCode=cjme20. Accessed October 3, 2016.
Compassion. http://www.pathwaytohappiness.com/writings_compassion.htm. Accessed October 3, 2016.
ထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့ အခြေအနေကြောင့် လူတော်တော်များများမှာ ခံစားလာရတဲ့ Apathy
စိတ်အတက်အကျ ဆိုင်ရာ ရောဂါများ